Qisadi Saamiya iyo Xaamud – Xeernews24
Qisadi Saamiya iyo Xaamud
21. Juni 2016 /in Qormooyin/Articles /von admin
Haweeya, wax ay ku dhalatay goboladda waqooyi ee soomaaliya dabayaaqadii sagaashannaadii Kuna soo kortay isla gobolkay ku dhalatay. Waxbarashadii guud ahaan kusoo qaadatay magaaladay ku barbaartay.
Wakhtigii nolosheeda waxa ay lasoo qaadatay hooyadeed aabaheed iyo walaalaheed. Noloshu waxa ay leedahay caqabado badan oo soo foodsaara soona wajaha qof kasta oo bashara.
Weligeed lamay kulmin wax dhibaato ah sidoo kale muu jirin culays kaga yimi dhanka qoyskeeda hiil iyo hooba qoyskeedu wuxu ahaa mid lagarab taagan. Wakhtigu, wuu soo dhaweeyey aduunyadu waxay kuqaabishay waji furan, farxadina buuxisay.
Muddo laga joogo saddex sanno ayey ka fara xalatay hayaankii dheera ee waxbarasho dugsi hoose, dhexe iyo sare. Isla judhiiba waxay sitoosa u bilowday jaamacadda.
Way weynaatay oo gashaanti madaxa la kacday bay noqotey. Qurux iyo qaayaba Allihii abuuray u dhamee. Haweeyi, waxa ay u xamaan urursatay haasawe. Sida caadadu tahay ragga ishoodu aad bay usoo jiidataa wakhtiga habluhu gashaatinimo guntiga u xidhaan.
Dhalinyaradu tartanbay u galeen, hamiga u sareeya ee dhallin yarada xaafaddoodu wuxu ahaa hanashada Haweeya. Isku day badan kadib kuma ay guulaysan raggaasi, sababo badan dartood.
Waa mide, Haweeyi, way ka hanwayneyd dhallin yaradaa, Inta badan hoos umay eegi jirin faceeda ee waxa ay kor u eegi jirtay kuwa ka sarreeya.
Iswaynaysiiin iyo qab yada laqumanaa iyada madaxeeda dhaanshay. Cudur daarbay samaysan jirtay, kolka ay dhallinyaradu u soo bandhigaan jacayl, mid ku qanca iyo mid aan ku qanciba, dani waxa ay badi jirtay in ay niyadda ka saraan arrinteeda.
Haweeya, waxa ku jiray hammi dhoof iyo sida ay u heli lahayd nin qurbe jooga. Inta iyada laga fikiri jiray waxa ay i yadu na ku fikiri jirtay nin debad jooga.Haweeyi, waxa ay adeegsan jirtay baraha ay bulshadu ku kulanto (social media) siiba faysbuugga.
Maalin maalmaha kamida ayey badashay sawirkii wajahada faysbuuggeda yaalay dabadeed na waxa ay soo dhigatay sawir ay aad u bilicsan tahay, mid kamida raggi asxaabta kala ahaa barkulanka magiciisan la odhan jiray xaamud ayaa siifaafiyey sawirkeeda (share gareeyey) maalmo dhawra kadib, waxay halacsatay ninkan sawirkeeda faafiyey waxay lasamaysay wada hadal waxa aanay ka codsatay inuu sawirka meesha uga qaado.
Dalabkii Haweeya wuu aqbalayxaamud , laakiin shardi buu ku xidhay. in ay xidhiidh lasamayn doonto ayuu ogaysiiyey haweeya.
Aqbaltu ayey jawaab u siisay sidiibaa laysku bartey xidhiidh jacayl ayaa dhex maray Haweeya iyo Xaamud. Muddo waxay sidaa ahaataba wuxu la socodsiiyey inuu iman doono soomaaliya siiba gobolkay ku nooshahay, arinkaa aad bay usoo dhawaysay, farxad aan qiyaas lahaynna wuu ku abuuray.
Haweeyi, waxa ay bilowday diyaar garow waxayna isku sii diyaarisay sidii gabadh ninkeedu soo dagayo oo kale. Subaxnimo salaasa ah ayuu Xaamud soo cago dhigay gayigii Haweeyi ku noolayd isla habeenkiiba lays arag layskuna sii qanac dhan walba.
Hadyad la gudoonsii haweeya farxad iyo qalbisan kaga timi hotelkii daganaa Xaamud. Haweeyi waxa ay ahayd gabadh aad u faajigan dhanka ragga aadna iskaga ururin jirtay, balse Xaamud oo danno gaara lahaa wuxu beddelay maankeeddii iyo maskaxdeediiba sidoo kale, wuxu hantay oo uu gacanta ku dhigay qalbigeedii.
Kulanno badan oo isdaba jooga kadib wiilkii wuxu xalaashaday guud ahaan Haweeya jidhkeedii iyadoo raali ka ah kuna qanacsan sida uu Xaamud danihiisa u gaadhaayo.
Habeen walba way u taggi jirtay Xaamud iyadoo gurigooda kaga anbaba bixi jirtay sidii ay jaamacadii aadayso. Haweeyi danbay lahayd Xaamudna danbuu lahaa, laakiin guud ahaan waxa kala gadisneyd danaha ay wateen.
Iyadu Yurub doon bay ahayd, halka uu isagu raaxo tag ahaa. Jidh xafidnaa labaatan sanno ayuu ku xumeeyey toddobaad keliya. Haweeyi waxa ay ahayd ismoog aan ka fikirin mustaqbalka danbe raadka xun ee uu kaga tagaayo falalka Xaamud samaynaayo.
Kama ay fikirin aabbaheed iyo hooyadeed sida ay uga xumaan doonaan danbiga ay ka gashay nafteeda hal daqiiqana hanoqoto e may xasuusan jacaylka ay walaalaheed u hayaan iyo sida ay ugu faani jireen qiimaha ay leedahay gabadhoodu.
Haweeya waxa badelay kalmadaha jilicasan iyo adduunyada yar ee dhamaadka leh. Wax noloshaa lagu wada jiraba waxa soo yaraaday fasixii xaamud soo qaatay, maalmo yar kaddib wuu laaban doona haweeyise taas way hilmaansan tahay. Waxa ay niyadeeda ku soo celcelisaa kalmadaha Xaamud ugu sheekeeyo.
” Haweeyaay, marna hayga filan inaan xumaan kuu gaysto, sharaftaada iyo karaamadaada waxba uma dhimi doono barri waxa aad noqon doontaa xaaskayga waxa aad jeceshay oo dhanna waan kuu samayn doona “.
Hadallo aan geedka gaadhsiis nayn ayuu ku maaweelin jiray iyaduna way aamintay oo isku dhiibtay, nin aan diin iyo dhaqantoona ubanayn oo wata dhaqan gaalo.
Waxa soo gaba gaboobay ayaamihii fasaxa kulunkii u danbeeyey layskugu yimi ogaysii inuu barri shanta subaxnimo dib u laaban doono Waxay ku noqotay Haweeya arintaasi naxdin, anfariir iyo afkalaqaad aanay waligeed sugeyn oo hadaladiisii oo dhan dib usoo xasuusiyey kolkaas bay waydiisa: Walaal, guurkii mee ? jacaylkii se ma intaas buu ahaa ?
Waa nin danleh oo dantiisii gaadhee, waxa uu hadal ugu gaabiyey ” waxan ka fikiri doonaa marka aan ku noqdo waddankaan ku noola “. Haweeyi, mahaysato wakhti ay ku kifirto, wakhti ay ku go’aansato sidii ay asxaabteeda ugu sheegi lahayd. Waxa ay haysatay wakhti yar kaasi na wuxu kaga dhammaaday oohin iyo u qaadan waa.
Waagii sidii ugu bari Xaamudna isna ka anbabax. imika Waa iyadda iyo qolkeeda waxa weheliya musiibada ku hubsatay. Ma jirto cid arirnta la ogayd oo la oyda cid arinta la ogayd oo murugada laqaybsataa wax walba way ku kaliyoodeen.
Mustaqbalkeedii iftiimaayey wuxu isu beddelay mid mugdiya muddo soddon cisho gudahood ah. Waxa lumay hadafyadeedii, waxa soo gabo gaboobay himiladeedii dheerayd.
Waxa ay waydey kalsoonidii hooyadeed sharfatii aabbaheed u hayey milgihii iyo miisankii ay bulshada Ku dhex lahayd. Nolosheeda waxa ay ka doorbidaysaa geeri. Ma haysato waxay shalay haysatay…malaha xoriyaddii ay lahaan jirtay iyada iyo dumarka xun xun wax fara oo u dhaxeeya ma jiraan.
Qisadii haweeya iyo xaamud
Qalinkii Qoraa salma Aadan
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2016/06/imagesNPJ8N8Q3-1.jpg 225 225 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2016-06-21 21:28:092016-07-05 16:50:58Qisadi Saamiya iyo Xaamud
xog la ogaaday sababta Horn cable hawada looga waayey Kooxa isku soo haddhay koobka Qaaradda Yurub